इराती वन, कालो वन पछि सबैभन्दा ठूलो यूरोपीयन बीच वन | यात्रा समाचार
छवि | लुगार्निया
स्पेनको उत्तरमा तपाईंले स्पेनको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईंले बलियो कालो र रमाईलो चन्दवाँको साथ बीच र देवदार रूखहरूको ज forest्गलमा प्रवेश गर्न जर्मन ब्ल्याक वनको यात्रा गर्नुपर्दैन। कारबाट प्याम्लोनाबाट एक घण्टा भन्दा बढी इराती वन हो जुन पुरानो महाद्वीपको सबैभन्दा प्रख्यात प्रकृति भण्डार हो। यसका भ्रमण गर्नेहरू यसका बारे भन्छन, निस्सन्देह, यो एक जादुई ठाउँ हो।
1 इराति वनलाई थाहा छ
2 इराति वनको वनस्पति
3 इराति वनमा जीव जन्तु
4 इराति वन भण्डार
5 इराटी वनमा कसरी पुग्ने?
6 इराटी वनको भ्रमण कहिले गर्ने?
इराति वनलाई थाहा छ
इराति वनले लगभग १,17.000,००० हेक्टर जमिनको विशाल हरी प्याच बनाएको छ जुन समय र मानव कार्यमा व्यावहारिक अक्षुण्ण छ। गत शताब्दीहरूमा भएको लगि is्ग हो जुन इ England्गल्यान्ड बिरूद्ध लडेका जहाजहरू निर्माण गर्न वनका ठूला क्षेत्रहरू काटिएका थिए। ईराती नदी त्यस समयमा नदी सडकका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो जब यो लग स transport्गेसा सदनमा पुर्‍याइन्थ्यो।
ज forest्गलको प्राकृतिक उत्थान यस क्षेत्रमा अनुभव गरिएको प्राकृतिक वर्षाको उच्च दरको साथ थियो र यसले संरक्षणको स्थिति देखाउँदछ जुन यो पाइन्छ र प्रत्येक इकोसिस्टमको सन्तुलन। यसैले इराति वन वन्य जीवनको एकल क्षेत्र हो, दुवै बोट र जनावरहरु।
छवि | उओलाला
यस क्षेत्रमा वर्षाको उच्च दरले ल्यान्डस्केप टोरेन्ट र स्ट्रिमहरूले भरिएको छ जसले यसको जटिल राहत डट गर्दछ। ती मध्ये अर्टक्जुरिया र उर्बेल्टजा बाहिर उभिएका छन् जुन इराती नदीको निर्माणको लागि भर्जिन डे लास न्युभर्स हर्मेटेजको फेदमा सम्मिलित छन्।
प्रकृतिको अद्भुत आश्चर्य जुन नवर्रेको पूर्वी पाइरेनीस, एजकोआ र सालाजार उपत्यकाको अगाडि पहाडहरूले घेरिएको बेसिनमा अवस्थित छ। एक विशाल र असाधारण ठाउँ यसको सबै वैभव मा वातावरण को आनन्द उठाउन।
इराति वनको वनस्पति
इराती वनको १ares,००० हेक्टर दुई आवश्यक प्रजातिहरू मिलेर बनेको छ: फर्श र बीच, या त सँगै मिसिन्छ वा छुट्टिन्छ। यद्यपि, हेजलनटहरू, कपालयुक्त ओक्स, यूज, लिन्डेन रूखहरू, म्यापल्स, होली र सर्वाल पनि फेला पार्न सकिन्छ।
हाल बीचमा, फर र अन्य प्रजातिहरू फर्न, मोस, लाइचेनसँग मिलेर बनेका छन् ... क्रोमेटिक प्रजाति शरद umnतुको आगमनसँगै चरम शिखरमा पुग्छ, जब हरियोले रूखको पातलो तातो खैरो, रातो र कुलोलाई बाटो दिन्छ।
छवि | नुन र रक
इराति वनमा जीव जन्तु
उच्च भूभागको चमकदार घाँसे मैदान र सेल्भा डे इराटीको घना ज्गलले असंख्य वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र आश्रयको रूपमा काम गर्छ। जस्तै स्याल, जंगली डुars्गा, रोबिन, फिन्च, सेतो ब्याक, wrenches, मार्टेन, ट्राउट र हिरण। पछिल्लो शरद theतुका नायकहरू हुन् किनकि यो गर्मी र शीतल मौसम हो, जसको साथ तिनीहरूले महिलाहरूलाई जित्न खोज्छन्, ज forest्गलभरि फिर्ता आउँछन्।
इराति वन भण्डार
सेल्भा डे इरातिमा, त्यहाँ तीन प्रकृति भण्डारहरू छन् जुन वातावरणको सबैभन्दा बहुमूल्य क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्दछ। फ्रान्सको सिमाना नजिक धेरै नै, एजकोआ उपत्यकामा, मेन्डिलाटज रिजर्व अवस्थित छ, जुन यसको गाह्रो पहुँचको लागि धन्यवाद एन्क्लेभको इष्टतम संरक्षण हासिल गरेको छ किनकि यो लगि toको प्रभावमा पर्दैन।
सेल्भा डे इराटीमा बसोबास गर्ने अर्को भण्डार ट्रास्टुइबर्तेआ होमाउन्ट पेटक्सुबेरोको उत्तरी ढलानमा पनि एजकोआ उपत्यकामा। यहाँ केश फुलको बाक्लो जंगल छ।
सेल्भा डे इराटीको प्राकृतिक भण्डारहरूको तेस्रो माउन्ट ला क्युसेसनमा अवस्थित छ hect 64 हेक्टर क्षेत्र मा, जो Lizardoia को नाम प्राप्त गर्दछ किनकि यसले homonymous माउन्टको उत्तरी ढलान कब्जा गर्छ। जंगलको संरचनाको कारण यो इराति वनमा सबैभन्दा ठूलो चासोको ठाउँ मानिन्छ। केहि पहुँच सडकहरू र यसको अलगावले यो असाधारण आकारको नमूनाहरूको साथ सम्पूर्ण इबेरियन प्रायद्वीपको सबैभन्दा लामो-बाँच्न बीच बीच बनाएको छ।
छवि | नाभ्रा पर्यटन
इराटी वनमा कसरी पुग्ने?
इराती वनमा प्रवेश गर्न हामीसँग दुईवटा मुख्य पहुँचहरू छन्: Ochagavía, पूर्वी पहुँच जहाँ प्रकृति व्याख्या केन्द्र अवस्थित छ र जहाँ आगन्तुकहरूलाई सबै मार्गहरूको सूचना दिइन्छ, र अर्बाइजेटा, पश्चिमी भाग।
भर्सन डे लास न्युभर्सको हर्मेटेज नजिकै रहेको कासास डे इराटीमा, त्यहाँ अर्को सूचना केन्द्र छ र विभिन्न रेस्टुरेन्ट सेवाहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। र एरिजोलामा अर्बइजेता हतियार कारखाना नजिकै अर्को पनि छ, जसले १ 2007 औं शताब्दीको वास्तुकलाको खजाना भएको कारण २०० being मा सांस्कृतिक चासोको साइट घोषणा गर्‍यो।
इराटी वनको भ्रमण कहिले गर्ने?
कुनै पनि समय प्रकृतिमा जानको लागि उपयुक्त छ र यो प्रसारित गर्दछ कि अद्भुत विशालता द्वारा मोहित हुन। यद्यपि शरद duringतुमा इराती वनको भ्रमण गर्नु वनस्पतिमा झल्किने र colors्गको विस्फोटका कारण विशेष र अद्वितीय आकर्षण हो। एक अद्भुत छवि जुन सदाको लागि रेटिनामा मा कुँदिने छ। भ्रमण तपाईंको आफ्नै वा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा सेवाहरू राखेर गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » इराती वन, कालो वन पछि सबैभन्दा ठूलो यूरोपीयन बीच वन